Malunga nathi-iYuyao yeHlabathi yezixhobo zokuLwa noMlilo kwiFektri
Ifektri yeYuyao yeHlabathi yezixhobo zokuLwa noMlilouyilo lobungcali, umenzi wophuhliso kunye neempahla zebronze zangaphandle nezobhedu, iflange, ipayipi efanelekileyo yeplastiki kunye nokunye. Sikhoyo kwi-Yuyao County e-Zhejiang, e-Abuts ngokuchasene ne-Shanghai, i-Hangzhou, i-Ningbo, kukho indawo entle kunye nokuhamba okufanelekileyo.
Sinokubonelela ngesicima-mlilo, isixhobo sokucoca amanzi, esokutshiza ngemilomo, ngokudibanisa, izivalo zesango, iivalves zokujonga kunye neevalvu zebhola. Senza zonke ezi mveliso, ngokungqongqo zihambelana ne-API, i-JIS kunye nemigangatho ye-BS. Zonke iimveliso zethu zithobela imigangatho esemgangathweni yamazwe aphesheya kwaye zixatyiswa kakhulu kwiimarike ezahlukeneyo kwihlabathi liphela. Umzi-mveliso wethu ugubungela ummandla weespare ezingama-8000, ngoku sinabasebenzi nabachwephesha abangama-35. Amaziko ethu ane-epuipped kunye nolawulo olukumgangatho ophezulu kuwo onke amabakala emveliso asenza sikwazi ukuqinisekisa ukoneliseka kwabathengi. Ngenxa yeemveliso zethu ezikumgangatho ophezulu kunye nenkonzo ebalaseleyo yabathengi, sizuze inethiwekhi yentengiso yehlabathi efikelela eMntla Melika, eMzantsi Melika, eAsia, kuMbindi Mpuma, eYurophu.
Inkampani yethu ihlala iselukholweni: ukunyaniseka sisiseko seshishini, ukunyaniseka kunqabile ekunikezeleni, kuthatha umthengi ukuba abe yeyona nto kugxilwe kuyo, ngokubhekisele kumgangatho wobomi. Ukuba unomdla kuyo nayiphi na imveliso yethu, nceda unxibelelane nathi. Sijonge phambili ekwenzeni ubudlelwane obunempumelelo kwezoshishino kunye nabathengi abatsha kwihlabathi liphela kungekudala.